BBC Somali - Warar - Israel oo kordhisay weerarka Qasa
Israel oo kordhisay weerarka Qasa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Novermber, 2012, 10:10 GMT 13:10 SGA
Qasa ayaa burbur kale uu weerarka u keenay iyadoo afar sano oo kaliya laga joogo weerarkii 2008 oo ay ku dhinteen 1400 oo qof.
Ciidamada cirka ee Israel, ayaa weeraray xafiiska Raiisalwasaaraha iyo dowladda Xamaas ee Qasa. Maalintii afraad ayay Israel weerar ku haysaa Falastiiniyiinta.
Israel ayaa sheegtay inay qaaday in ka badan boqol iyo siddeetan weerar tan iyo xalay habeen barkii. Waxay sheegtay inay qasaaro wayn u gaysatay godad loo isticmaalo in madaafiic Israel looga soo rido, oo ay ku jiraan magaalooyinka Tel Aviv iyo Qudus (Jerusalem)
Ugu yaraan soddon iyo afar falastiiniyiin ah iyo Saddex reer Israel ayaa la dilay tan iyo intay weerarka uu bilaabmay Arbacadii.
Jimcihii dowlada Israel ayaa ansixisay in loo yeero ilaa toddobaatan iyo shan kun oo ciidamo kayd ah.